Global Voices teny Malagasy » Shujaat Bukhari, mpanao gazety Kashmirita maty voatifitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jona 2018 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Ieshan Wani Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, India, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Shujaat Bukhari, mpanao gazety, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Rising Kashmir sady mpanoratra monina ao Srinagar. Sary avy amin'ny kantoy Twitter an'i Shujaat Bukhari
Maty nisy nitifitra  tao Srinagar, renivohitra asara an'i Jammu sy Kashmir i Shujaat Bukhari , tonian'ny gazety Kashmirita mivoaka isan'andro miteny anglisy antsoina hoe Rising Kashmir, fahafatesana niteraka fahatairana nanerana ny faritra.
Nohodidinina ahiahiana ho vondrona mpitolona nitifitra taminy sy ny mpiambina azy manokana ny fiarakodiany. Maty vokatry ny ratra nahazo azy tany amin'ny hopitaly ny roa tamin'ny mpiambina azy manokana.
Mpanao gazety Shujaat Bukhari voatafika akaikin'ny Tobin-gazety ao Srinagar. Maratra mafy ihany koa ny mpiambina azy manokana.
Taorian'ny fanafihana an'i Shujaat Bukhari dia mazava fa tsy misy ny olona mahazo antoka ny fiarovana azy ao Kashmir. Nitranga tao afovoan-tanàna Lal Chowk ny toe-javatra. Angamba vao niala n biraony i Shujaat Bukhari raha voatifitry ny mpampihorohoro izy. Mety ho mpiasa eo ambany fahefany no nanao izao.
Tsy misy andro tsy andatsahan-drà ao Kashmir. Vakivakio anie ny asan'i Shujaat Bukhari ahafantaranao hoe iza no mifofo ny ainy. Tsy misy ny zavatra azo antoka. Na iza na iza mety hisy hamono na aiza na aiza na rahoviana na rahoviana.
Nilaza ny mpiara-miasa amin'i Bukhari fa vao nivoaka ny trano fiasany mihitsy izy rehefa nahavita ny asany isan'andro ary vao hamarana ny fifadian-kanina raha nitranga ny fanafihana.
Iray amin'ireo vitsy tony fihetsika saingy tsy mena-miteny ao Kashmir i Bukhari izay mijoro hisian'ny fifampiresahana eo amin'i India sy i Pakistan mba hamahana ny raharaha Kashmir.
Vakio ihany koa: Fifanandrinan'ny vahoaka Kashmirita sy ny fanjakana Indiana 
Efa navitrika hatramin'ny taona 1989 ny fihetsiketsehana hitakiana ny fahaleovantena na ny Azadi sy ny fizakan-tena ara-politika ao amin'ny Lemak'i Kashmir ka tsy mitsahatra ny iparitahan'ny miaramila indiana hatrany i Jammu sy i Kashmir ka eo ambanin'ny sata toy ny Lalàm-pahefana manokan'ny tafika mitam-piadiana  sy ny Lalànan'ny filaminam-bahoaka. Efa nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny governemanta indiana fa heveriny ho ao anatin'i India tanteraka i Jammu sy i Kashmir iray manontolo.
Polisy Indiana mijoro eo akaikin'ny lalana ho an'ny mpandeha an-tongotra ao an-tanàna ambony ao Srinagar, renivohitra asaran'ny fitantanam-panjakana Indiana ao Kashmir. Sary avy amin'ny mpanoratra tao amin'ny Instagram.
Niasa ho an'ireo famoahana malaza ao amin'ny firenena sy iraisampirenena i Bukhari ary namoaka lahatsoratra tena mandona, tsy menatra na oviana na oviana maka fijoroana tsy tiam-bahoaka. Solontena manokan'ny gazety The Hindu izy nanomboka ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 2012 ary mbola manohy manoratra ho an'ny gazetiboky Frontline.
Naneho ny hatairany  ny Klioban-gazety ao India ary ankona tamin'ny zava-nitranga tao amin'ny lemak'i Kashmir.
Namoaka fanambaràna  ny Fikambanan'ny tonian'i India:
Melohin'ny Fikambanan'ny tonian-gazety tsy am-pisalasalàna ny famonoana an'i Shujaat Bukhari, tonian'ny Rising Kashmir. Fanafihana henjana amin'ny fahalalahan-gazety sy ny feo demaokratika izao. Mbola hamoaka fanambaràna amin'ny antsipiriany tsy ho ela izahay.
Nieli-patrana tao amin'ny media sosialy ny fiaraha-miory:
Nisioka i Siddharth Varadarajan, tonian'ny vavahadim-baovao Wire:
Efa niara-niasa tao amin'ny The Hindu izaho sy i Shujaat Bukhari. Mpanangom-baovao nahavitabe tokoa izy, ary, tamin'ny maha-tonian'i Rising Kashmir azy, feo matanjaka ho amin'ny firahalahian'ny famoaham-baovao mifanandrina, tena feon'ny fahaiza-misaina sy ny hevitra tokoa. Tsy misy teny ampy hanamelohana ireo mpisoloky namono azy.
Nisioka i Marvi Sirmed, Mpikambana ao amin'ny vaomiera mpanatanteraka, Vaomieran'ny zon'olomelona ao Pakistan (HRCP) sady solontena manokan'ny Daily Times Pakistan:
Feon'ny fisainana tao Kasmir i Shujaat Bukhari. Mpanao gazety mamirapiratra nanoka-tena tsy hiditra amin'ny hiringiriny (na avy aiza na avy aiza). Nanao ny asany tamim-pahamendrehana mandra-pialan'ny fofonainy farany izy ary nandoa ny vidin'ny fijoroana tsy azo hozongozonina. Nitatitra tsy tamim-pitongilanana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nataon'ny vondro-tafika indiana sy ireo mahery fihetsika ao Kasmir.
Tsy vao izao i Bukhari no lasibatra.
Tamin'ny 8 jolay 1996, nisy vondrona mpampihorohoro naka mpanao gazety tao an-toerana miisa 19 an-keriny tao amin'ny distrikan'i Anantnag ary nanao takalon'aina azy ireo tao anatin'ny fito ora farafahakeliny. Iray tamin'ireo nalaina an-keriny ireo i Bukhari.
Efa nomena fiarovan'ny polisyihany koa izy taorian'ny nanafihana azy tamin'ny taona 2000.
Nisioka i Shehla Rashid mpianatra politisiana:
Na dia amin'ny toerana tsimifaditrovana tahaka an'i Kashmir aza, dia tsy misy fanjohin-kevitra mihitsy ny famonoana an'i Shujaat Bukhari ho faty. Manam-panontaniana iray ny rehetra ao amin'ny fanjakana: “Nahoana no misy mitady azy ho faty?”
Ankoatra ny govt izy hita ho efa nahavita fehin-kevitra
Antso ho an'i @MehboobaMufti  hiantoka ny fanadihadiana
Nisioka i Omar Abdullah, Filohan'ny minisitra indiana mitantana an'i Jammu sy Kashmir teo aloha:
Tsy maintsy mitohy ny sehatra. Araka izay efa notadiavin'i Shujaat. Ity no raharaha Rising Kashmir anio. Fa afa-mamoaka ny gazety ny mpiara-miasa amin'i Shujaat manoloana ny alahelo tsy hay ihoarana no vavolombelon'ny fahaizan-dry zareo miasa sy ny fanomezam-boninahitra mendrika indrindra ho an'ny lehiben-dry zareo lasana farany.
Araka ny lazain'ny Mpanangom-Baovao Tsy Voasakan-Tsisitany, afa-nandositra fikasana hamono nataon'olona mitam-piadiana i Shujaat Bukhari tamin'ny jona 2006. Nolazain'i Shujaat Bukhari tamin'ny  Mpanangom-Baovao Tsy Voasakan-Tsisitany (RSF) fa “Tsy azo fantarina mihitsy ara-virtoaly izay fahavalontsika sy izay namantsika”
Na eo aza izany, tsy afa-mampangina ny peniny ny basy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/16/121393/
 Maty nisy nitifitra: https://timesofindia.indiatimes.com/india/journalist-shujaat-bukhari-shot-dead-by-gunmen-in-srinagar/articleshow/64590451.cms
 Fifanandrinan'ny vahoaka Kashmirita sy ny fanjakana Indiana: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-kashmiri-people-versus-the-indian-state/
 Lalàm-pahefana manokan'ny tafika mitam-piadiana: https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_%28Special_Powers%29_Act